Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda uvele 2012. Kwakuthinta badunyiswe we 865 esenzeka edolobheni. Initiators babe abafundi Vologda Institute of Business. Isikhumbuzo anikezelwe Vologda ekhethekile yakhuluma Okan isici eyaziwa cishe kulo lonke izwe.
Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda uvele isikwele at Cathedral Hill. Kukhethwa senziwa yini ngengozi. Phela, lokhu eyintandokazi kunazo uhlamvu abakhileyo ezungeze yokubhala isiRashiya. Kuyinto ngenxa yakhe bonke bazi kahle kamhlophe ukuthi Vologda ezinjalo uthi.
Isimo Warm lo incwadi evela Vologda osekunesikhathi. Kuyadingeka ukuthi cishe zonke brand ayo abe ukubunjwa yabo. Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda wabonakala ngo-June 29, ekubeni isipho esiyinhloko ukugubha uSuku City.
Kukholakala ukuthi Vologda yasungulwa ngo 1147. Lolu suku kunqunywa ngesisekelo umlando "sikaKhisimusi sezimangaliso Gerasim ka Vologda", esanyatheliswa kuyi 1666. Kanye umkhiqizo "Umlobi womlando" elingelakwaJuda Ivanu Slobodskomu. Waqeda ke e 1716.
Nokho, kuyinto ukubhuka ukuthi zombili lezi imithombo ebhalwe ngesisekelo imisebenzi ngaphambili ukuthi awuzange ngasinda. Kusitshela ukuthi indela Gerasim wehlela phezu komfula Vologda futhi wasungula zintathu Monastery.
Ngokusho kweminye imithombo, ekhulwini XII esizeni Vologda yesimanje kakade isiphetho encane ayekhona. Nokho, kwakungakabi edolobheni, waba lenqaba enezivikelo eziqinile. Ngakho mhlawumbe, e 1147 - hhayi ngonyaka isizinda kanye ngonyaka we kukhulunywa ngaye okokuqala Vologda. Naphezu kwakho konke lokhu, kuba kusukelwa kulolusuku, izazi-mlando zanamuhla ziyaqhubeka.
Ngakho-ke, ngo-2012, lapho kwamiswa itshe lesikhumbuzo uhlamvu "O" e Vologda umkhosi weminyaka engu - iminyaka 865 selokhu aba khona.
Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda okukhulunywa ngaye, ukudalulwa okuyinto, kulesi sihloko ubonisa olunye lwezimpawu ayisihluthulelo Vologda. Kodwa akuyena yedwa.
Lapho noma ubani ezwa igama emzini Vologda, masinyane ucabanga Vologda ibhotela. Namuhla-ke ingenye brand ezinkulu esifundeni. Sweet ibhotela unsalted is lonke elaseRussia eyaziwa futhi ngalé kwemingcele yayo, sibonga iphunga ekhethekile futhi ukunambitheka. Kungenzeka ukuba sifinyelele ngosizo indlela ekhethekile zokuhlela ukhilimu fresh ngaphansi okushisa aphakeme. Ezicashile ubuchwepheshe agcinwa eyimfihlo.
Kuyaphawuleka ukuthi kukhona Vologda ibhotela umsunguli. Bona abhekwa umfowabo edumile impi umdwebi Vasily Vereshchagin - UNicholas. Ngaphambi kokuya umkhiqizo kawoyela ekhaya, kwase kuyisikhathi eside wafunda avalele ukulima eYurophu. Ngibhale ukuthi dairies ezihamba phambili kusukela phesheya, ukuze abaqeqeshiwe onjiniyela Russian.
Kukholakala ukuthi Vologda ibhotela lokuqala yadalwa 1871. Ngaphambi nje kwalesi Vereshchagin wabuya esuka eParis, isingathwe Fair Wezwe, anikezelwe avalele ukulima. Kube wayephefumulelwe uwoyela nge ukunambitheka evelele Nutty ekhiqizwa laseNormandy. Wasibekela umgomo - ukwenza umkhiqizo ungcono ekhaya.
Futhi wezwa Vologda, wonke umuntu uyakhumbula ingoma bese Borisa Mokrousova futhi Mihaila Matusovskogo ebizwe - "Vologda". Mayelana-ke abe legend ezihlekisayo ezisemadolobheni okutshela zonke izivakashi. Njengoba khumbula, umlingisi lyrical we ngoma incwadi mathupha eposini ukuze zithunyelwe abethandana naye, ohlala Vologda, endlini nge udonga, amaqembu ezibaziweyo. Jokers zithi ngesikhathi ubhala izingoma Vologda kwaba indlu eyodwa nje kuphela udonga, amaqembu ezibaziweyo. Laliqhele Esikhunjeni Venereal Izifo Umtholampilo.
Ngo-April 2012, yabe seyaziwa ngokuqinisekile lapho kuyoba lesikhumbuzo ukuze uhlamvu "O" e Vologda. Umlando nesenzakalo ihlobene isinyathelo abafundi Vologda Institute of Business. Manje wabiza Vologda ngokuBambisana College.
Kufanele kuqashelwe ukuthi, iziphathimandla zedolobha ngokuzithandela asekelwe lesi sicelo somshado. Ngemva kwengxoxo, tindvuna abaqavile emphakathini sebefike esiphethweni sokuthi elilungile kakhulu endaweni indawo ku Cathedral Square kuyoba egqumeni, okuphambene endlini ka umlobi odumile, ongowokuzalwa Vologda Varlama Shalamova. kubhekwa Ngaphambili inketho ukufaka uphawu yesikhumbuzo ngesikhathi ugogo Square. Kodwa sinqume ukukunika yena, ngoba le ndawo maduze sizofeza kabusha.
Abantu bomuzi kwakudingeka akhethe ukuthi kungaba lesikhumbuzo ukuze uhlamvu "O" e Vologda. Ulwazi mayelana ukukhetha yephrojekthi safakwa website lesikhungo. Umncintiswano yahanjelwa 17 imidwebo Vologodians kwadingeka ukuba ukhethe esihle.
Vologda lwesigodi, eyasebenza njengodonga isisekelo sokuthethelelwa ukubukeka lesikhumbuzo ukuthi incwadi kubhekwa omunye esiphawuleka kakhulu kuleli zwe. He is yeqembu ezilimi eziyimixhantela enyakatho isiRashiya, eyayibonakala osakazwa kabanzi endaweni ye Vologda hhayi kuphela, kodwa futhi we Arkhangelsk esifundeni.
Kulokhu, kubalulekile ngolimi Vologda has izici zayo siqu ngabanye, okuyinto eyaduma kangaka. Ngezindlela eziningi, lokhu kwaba nesandla umbhali Vologda Vasiliy Ivanovich Belov, omunye abameleli bhá kweSoviet "dolobhana" temibhalo yephrozi netindzaba, umlobi kule noveli "Into evamile," inoveli "Eves" obubhalwe isebenza "Nsuku zonke ukuphila we Russian North". Nguye owaqala ngokukhazimulayo futhi wayevame emisebenzini yakhe ikakhulukazi Vologda lwesigodi. silulumagama ahambisanayo ngokuvamile butholakala mpendulwano bezinhlamvu ezingu bakhe, okwenza zikhumbuleke ikakhulukazi.
Kubukeka sengathi isikhumbuzo?
Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda, ogama sithombe kulesi sihloko, senziwa metal. Ngokusho imiphumela internet ukuvota evulekile ebibanjelwe kuyo Vologda Institute of Business, umnqobi kwakuba umakhi iphrojekthi Denis Pozdnyakov.
Ukuphakama lesikhumbuzo - mayelana ezintathu amamitha, it is esekelwe isinyathelo lapho kumi incwadi ngokwayo. isisindo Final - mayelana 300 kilograms. Isibonakaliso yesikhumbuzo lihlotshiswe bendabuko amaphethini zakudala enyakatho, okuyinto kubuswa Yiqiniso, Vologda. Ukukhiqizwa yayo kumbhali unikwe ngesilinganiso esingamaphesenti ingxenye yesine ka sesigidi sama-ruble. Kuyaphawuleka ukuthi cishe ngokushesha ngemva kokumiswa lesikhumbuzo kwaba winner ngesikhathi ehlonishwa embukisweni Interregional onesihloko esithi "Vologda - Ukuqamba yemakethe". amalungu amajaji kweqiniso baziswa umqondo umbhali, futhi bekubonakala ukuthi iqalise.
Isikhathi lesikhumbuzo wathatha kancane - amasonto amabili nje. Kodwa baye basebenzé kanzima kuyo, ngesikhathi Usuku City, njalo ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto eziyisithupha kakhulu ngensimbi usebenza workshop. Ukuthuthukiswa umdwebo ukusiza onjiniyela kwadingeka nomklami oyinhloko yalo muzi. Kwadingeka ngisebenze zensimbi, ukugoba zonke ngokuqinile ngokuvumelana izikimu, esigabeni yokugcina - Umdwebo. Ekugcineni kwanqunywa ukuba enze ohlangothini-by izinhlamvu ithusi, kanti eyesibili - igolide.
Kamuva Vologda abafundi abanakekela mayelana ukuthuthukiswa nokuhlonishwa kwemibhalo yalezi esifundeni yabo, baye baqala ukuthuthukisa i-portal ulwazi izivakashi, okuyinto kahle okuthiwa - "O". Utshela ngomlando, izakhiwo namasiko Vologda kakhulu futhi Yiqiniso, lesikhumbuzo, which busisa lesi sihloko.
Imininingwane izivakashi Portal
Portal based ngokushesha emva kuvulwa lesikhumbuzo, wadlala indima enkulu ekuthuthukiseni ngokuhlukumeza okunamandla izivakashi yalesi sifunda. Phela, kungenzeka ukuthi awutholi nje kuphela incazelo incwadi lesikhumbuzo "O" e Vologda, kodwa futhi ulwazi mayelana konke kuwufanele eza kule ndawo.
Kukhona cishe izinhlobo ezingu 8 izizathu ukuvakashela kule ndawo. Kuyinto ezemfundo, ezempilo kanye ukufaneleka, esebenzayo kanye zokungcebeleka, gastronomy, ezokuvakasha zenkolo, eco-tourism kanye uhambo ukuzijabulisa nezitolo.
Kuyaphawuleka ukuthi kunoma yiziphi kulezi zinhlelo, ungafaka Ukuvakashela lesikhumbuzo ukuze uhlamvu "O" e Vologda. History of the esifundeni unothile, kangangokuthi ngeke be bored, nokuthuthukisa ulwazi lwethu ingakusiza kakhulu.
Uhlu izindawo sikhumbuleke futhi yisakhiwo sodumo esikhathini Vologda esifundeni Yiqiniso, ayigcini lesikhumbuzo elilodwa incwadi "O". Ukuze zonke izivakashi kudingeka ukuvakashela yokuhlala Santa Claus, eyingqayizivele eRussia Museum of iphepha, uCyril Belozersky sezindela kanye Museum-reserve, Manor Gali, Vologda lace Museum, Manor Bryanchaninovs, Museum yezakhiwo-ethnographic "Semenkovo" indlu-Museum of Peter I.
Kufanele futhi ingasaphathwa Vologda Amasimu. Namuhla abaningi babo alinywa kuze kube manje, usebenzisa indlela esebenzayo, uhlamvu "O" e imikhiqizo yabo.
Ngokuyinhloko, lokhu lace, Umdwebo ukhuni izitsha zobumba, izitsha zobumba, ukukhiqiza imikhiqizo kusukela amagxolo birch, blackening isiliva.
Vologda lace - omunye uphawu yalesi sifunda. sici sabo esisemqoka esiwuphawu - uju, kanye iphethini ekhethekile ukuthi sifana yezithelo apula noma edlelweni ukuqhakaza.
Izaga Russian ngezinyoni: emhlabeni enezimpiko ngemehlo okhokho bethu
Nikeza emizweni ezintsha uwoyela abesifazane. Amazwana isicelo
Abantu abaningi kakhulu othanda ubhontshisi, asebenzisa akuyona ungaqiniseki
Uhlu yasendlini yezinganekwane ekhaya Ukufundwa
Ukufaka Windows 7 kusuka idrayivu ye-USB: algorithm yezenzo
Idlalwa kanjani ezemidlalo: 100 Ukufaneleka Amathiphu
Le filimu "Ukuphakama": nabalingisi ikusasa labo
Hosiyana - ingoma ngikhazimulise iNkosi